यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् पोर्न चलचित्र हेर्दा ! - Everest Dainik - News from Nepal
यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् पोर्न चलचित्र हेर्दा !
आधुनिक समयमा हरेक जो कोही व्यक्ति पोर्न चलचित्र हेर्नका लागि आतुर भइरहेका हुन्छन् ।
पोर्न हेर्दा जति सुख प्राप्त हुन्छ, त्यो सुख कहिले कहीँ पनि सायद पाउन सकिँदैन होला । तर, यसपटक तपाईं पोर्न चलचित्र हेर्दा यी कुराहरुमा विशेष ध्यान दिनुहोस्, ताकी त्यसको मजा अझ दुई गुणाले पाउन सकियोस् ।
याे पनि पढ्नुस ख़तरनाक हुनसक्छ मोबाइलमा पोर्न हेर्नु, ध्यान दिनुस यी कुरामा
पोर्न चलचित्र हेर्ने समयमा तपाईं सकेसम्म नरम खालका कपडा लगाउँदा अझ राम्रो मानिन्छ । जसले मजा लिन सकियोस् ।
रातको समयमा पोर्न चलचित्र हेर्दा आफूले लिने मजामा दुई गुना बढी हुन जान्छ । तपाई जब पोर्न चलचित्र हेर्दा आफ्नो कोठा राम्रो सँग बन्द गरी हेर्नुपर्दछ र त्यस चलचित्र आवाज पनि कम गर्नुपर्दछ वा इयरफोनको प्रयोग गर्दा पनि अरु व्यक्तिहरुले आवाज सुन्न पाउँदैनन् ।
यदि सुनिहाले भने त्यसको नतिजा के हुन्छ ? त्यो तपाईंलाई राम्रो थाहा छ । एजेन्सीको सहयोगबाट